रवी लामिछानेले हजारौं युवालाई ठगी गरेको आरोप ! – Life Nepali
न्यूज २४ टेलिभिजनवाट भर्खरै विदा लिएका चर्चित टेलीभिजन प्रस्तोता रवी लामिछाने विरुद्ध ठगीको आरोप लागेको छ। लामिछानेले न्यूज २४ टेलिभिजनबाट ‘रियालिटी शो’ ‘द लिडर’ प्रशारण गर्ने भन्दै सहभागिवाट रकम असुल गरी कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको आरोप छ । शोमा सहभागि हुन आवेदन दिएका काठमाण्डौंकै एक सहभागिले लामिछानेले हजारौं युवालाई ठगी गरेको आरोप लगाए। **थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस ***,
प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधिस समेत भईसकेका ब्यक्तिलाई अगाडि सारेर यस्तो काम गर्नु आफैमा गलत भएको उनको भनाई छ । ‘मैले गत बर्ष रबि लामिछानेले सञ्चालत गर्ने भनिएको रियालिटी शो ‘द लिडर’ मा सहभागि हुन १ हजार बुझाएर फर्म भरेको थिएँ। तर, अहिले आएर ‘शो’ को कुनै चर्चा छैन’ उनले भने–‘आम नेपालीहरुबाट १ हजार उठाएर बेपत्ता भएको देख्दा मलाई यो कतै ठगि त भएन ? भन्ने लागेको छ।’*थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस
उक्त ‘शो’ को वेबसाइट पनि बन्द रहेको वताएका उनले फोन सम्पर्क गर्न खोज्दा दिईएको फोन पनि वन्द नै रहने गरेको गुनासो गरे । ‘१ हजार ठुलो कुरा होईन, तर हजारौं युवाहरुले १÷१ हजार वुझाउँदा लाखौं÷करोडौं हुन्छ’ उनले भने–‘जिम्मेवार निकायले यसरी रकम असुलेर वेपत्ता हुन मिल्छ?’ टेलीभिजन शोका नाममा ठगी गर्ने मात्र नभई जिम्मेवार पदमा पुगीसकेका ब्यक्तिको इज्जतमाथि नै खेलवाड गरेकोमा पनि उनले दुःख ब्यक्त गरे।
भाषण र भिजन दुवैका आधारमा विजेता छनोट गरिने र प्रतिस्पर्धीबाट ‘द लिडर’ का विजेतालाई काठमाण्डौमा अपार्टमेन्ट, गाडी र २० लाख रुपैयाँबाट पुरस्कृत गरिने भनिएको थियो । आयोजकले कार्यक्रमले एक कुशल र असल राजनीतिक नेता जन्माउने दाबी गरेको थियो।* पुरा भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस
Previous एकै परिवारका चारभन्दा बढी सन्तान सेनामा हुनेलाई सम्मान गरिँदै !
Next ‘सबैले आ’फ्नो जि’म्मेवारी मात्रै पूरा गरे पनि देश सु’न्दर हुन्छ : कुलमान घिसिङ